Cryptocurrency miner anotadzisa kutsvaga kwekunze hupenyu | Gadget nhau
Cryptocurrency miner inotadzisa kutsvaga kwehupenyu hwepanyika
Ignacio Sala | | Cryptocurrencies, Noticias
Mugore rose ra2017, isu takakwanisa kuongorora kuti macryptocurrencies, akadai seBitcoin, Ether nevamwe, vakawedzera zvakanyanya kukosha kwavo, kudarika $ 19.000 mune Bitcoin. Kuti tikwanise kuchera mari yemadhora, tinoda chishandiso chine simba chinotsigirwa neGPU imwe kana dzinopfuura (sezvo zviri nyore kukwira maGPU akati wandei muchienzaniswa kupfuura ma processor akati wandei).
Iko kusanganiswa kweprosesa (CPU) pamwe chete nemifananidzo (GPU) kunoita kuti kuita kwacho kuve kwakakwirira uye nekudaro, mikana yekuwana mari yemadhora yakakwira. Ichi ndicho chikonzero chikuru chekushomeka kwemaGPU ane simba mumusika uye mashoma anosvika, anodaro nemutengo unorambidza. Apa ndipo patinomhanyira muchinetso chei cryptocurrencies nevatorwa.
Iyo Kutsvaga kweExtraTerrestrial Intelligence, inozivikanwa zviri nani seSETi, inotarisana tsvaga hupenyu hwekunze kuburikidza nekuongororwa kwemasaini emagetsi, kutumira mameseji akamirira kuti mumwe munhu apindurwe, uye kuongorora mifananidzo inogamuchirwa neteresikopu hombe yainayo pasi rese. Kunyangwe kusvikira nhasi kusvika nhasi havasati vawana chero chiratidzo chinoratidza kuvapo kwehupenyu hwepanyika hwekunze muchadenga, havana kurasikirwa netariro kunyangwe hazvo vanga vachiedza kweanopfuura makore makumi mana.
Asi, sekureva kweBBC, SETI inoda kuwedzera huwandu hwemarabhoritari anotarisira ongorora zvese zviratidzo uye mifananidzo yavanogamuchira kubva muchadenga uye nekuda kweizvi, ivo vanoda maGPU ane simba kwazvo pamusika, asi nekuda kwekukwira kwema cryptocurrencies iri basa rave kuita zvisingaite. Kuti vagadzirise huwandu hwakawanda hwe data ravanogamuchira, vanoda simba rakawanda, simba raunogona kuwana nenzira imwecheteyo sevacheri ve cryptocurrency, sezvandambotaura pamusoro.
Mamwe maSETI ekutsvagisa nzvimbo, akadai saBerkley, anoda anodarika zana maGPU kukwanisa kugadzirisa iyo yese ruzivo nekukurumidza sezvazvinogona. Sezvakataurwa naDr Werthimer, Chief Investigator pamuzinda weSETI muBerkley
KuSETI tinoda kuona akawanda ma frequency chiteshi sezvinobvira nekuti hatizive kuti vangangodaro vachipfuudza kangani uye tinofanirwa kutsvaga mhando dzese dzemasaini, ese AM neFM.
Berkley anoti vane mari, asi kunyangwe uine hukama hwakananga nevagadziriIvo havana kukwanisa kuvabata. Nvidia ne AMD vanoti vari kushanda nesimba kwazvo kuti vawane kudiwa kuri kuramba kuchikura kwe maGPU, kudiwa kwakatanga kuratidza mumitero yevagadziri vakuru ava, avo vanoti kukwira kwemari yemadhora kuri kuvaunzira imwe mari yavainge vasina kutarisira .
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Cryptocurrencies » Cryptocurrency miner inotadzisa kutsvaga kwehupenyu hwepanyika
inoita 3 makore
Chinyorwa chinonakidza !!
Google Dinosaur Mutambo
Google inobvisa bhatani re "tarisa mufananidzo" kubva kuGoogle Mifananidzo